Diyaarad rakaab oo tagaysa Kismaayo, Baydhabo iyo Baladweyne | Bartamaha
Mid kamid ah shirkadaha diyaaradaha eek a howl gala wadanka Soomaaliya ayaa bilaabaysa dulimaadyo dheeraad ah oo maxali ah.
Shirkadda Horn of Africa Airline ayaa iskaga dhex socdaali doonto magalooyinka Muqdisho, Kismayo, Baydhabo iyo Baladweyne iyadoona qaadi doonto dadweynaha rayidka ah.
Dhamaan goobaha cusub ee diyaaradan ay bilabayso iney tagto ayaa waxa ku sugan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada kuwaas oo dhawaan ka qabsaday kooxda Al Shabaab oo muddo haysatey, markaas oo aysen jirin wax socdaalo badan ah oo dhinaca hawada oo tagayay.
Dad badan oo aan wali ku kalsooneyn amaanka ku socdaalka dhulka ee goboladda dhexe iyo koofurta Soomaaliya ayaa jira kuwaas oo diyaaradahan ay u fududeynayaan iney tagaan magalooyinka waawayn ee Soomaaliya ee gacanta dowlada ku jira.
Shirkad lagu magacaabo Horn of Africa Airline ayaa ka billowday Muqdisho duulimaadyo joogto ah oo ay ku tagayso degmooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Baladweyne oo ay ku sugan yihiin ciidmada dowladda iyo kuwa AMISOM, iyadoo duulimaadyadan ay soo dhaweysay AMISOM.
Diyaaraddan ayaa waxay horay uga soo shaqeysay Somaliland iyo Puntland, iyadoona saraakiisha shirkadda ay u mahadceliyay ciidamada AMISOM dadaalka ay ugu jiraan sidii nabad Soomaaliya lagu soo celin ahaa iyo gacansiinta shacabka iyo dowlada.